अमेरिकाले धम्की दिएपछि ओलीको सरणमा प्रचण्ड, देउवालाई काउन्टर दिन के भयो सहमति ? — Sanchar Kendra
६विनोद शाही हत्या प्रकरण- मेयर अम्बिका चलाउनेले गरिन प्रहरीसामु आत्मसमर्पण, ६ जना अझै फरार
७विनाेद हत्या प्रकरण- मेयर अम्बिका चलाउनेविरूद्द किटानी जाहेरी दर्ता, स्थानीयले खोले यस्तो रहस्य
अमेरिकाले धम्की दिएपछि ओलीको सरणमा प्रचण्ड, देउवालाई काउन्टर दिन के भयो सहमति ?
काठमाडौँ । अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्र्ड लुले नेताहरुलाई फोन गरेर धम्की दिएपछि नेपालको राजनीति माहोल एकाएक तातिएको छ ।
लुको फोन आउने वित्तिकै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सरणमा पुगेका छन् ।
एमसीसीबारे निर्णय लिन आग्रह गर्दैै प्रचण्डले विहीबार सॉझ ओलीलाई फोन गरेका थिए । प्रचण्डले एमसीसीबारे निर्णयमा पुग्न आग्रह गरेको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।
प्रचण्डले ओलीलाई गरेको आग्रह उद्धृत गर्दै रिजालले भने, ‘एमसीसीमा तपाईंले निर्णय नगरी भएन ।’ ओलीले पहिले आफूले निर्णय गर्न प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएको रिजालको भनाइ छ ।
‘तपाईंहरूले पहिले केपी ओलीलाई हटाएपछि पारित गर्छौं भनेर बचन दिनुभएको छ, हटाइसकेपछि ‘४–५ महिनामा पारित गर्छौं’ भनेर लिखित कागज नै गर्नुभएको रहेछ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘अहिले सत्ता चलाइरहनुभएको छ, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्य छन् । पहिले आफूले निर्णय गर्नूस् । नेकपा (नेमाले) त निर्णय गरिहाल्छ ।’
माओवादीमा संशोधन विना एमसीसी पास गर्न नहुने मत बलियो छ भने एमालेले सरकार निर्णयमा पुगेपछि आफ्नो धारणा बनाउने अडानमा छ । तर सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस एमसीसी पास गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै हालतमा एमसीसी पास गर्नेगरी अगाडि बढेको अवस्था छ ।
बिहीबार मात्र अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री देउवा, ओली र प्रचण्डलाई पालैपालो फोन गरेर एमसीसी पास गर्न दबाब दिएका थिए । उनको दबाबपछि प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेको बुझिएको छ ।